Madaxweye Erdogan oo wadahadal la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee imaaradda Qadar - Horn Future
Madaxweye Erdogan oo wadahadal la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee imaaradda Qadar
Ankara (Horn Future)-Madaxweynaha Turkey Rajap Dayyip Erdogan ayaa waxa uu wadahadalo la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee imaaradda Qadar Sheekh Maxammed bin Cabdul Raxman Al Thani sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi.
Waxa kulankani ku saabsanaa arrimaha kusoo kordhay dhibaatooyinka ka jira Gacanka Carbeed, waxana uu ka dambeeyay kulan uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibada ee Turkey.
Ilo kasoo baxay madaxtooyada Turkey ayaa sheegay in kulankani uu ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada Ankara,kaas oo warbaahinta ka fogaa,iyada oo uu socday muddo saacad iyo 10 daqiiqo ah,waxana goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Turkey Jaawish oglu.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkey ayaa mar kale ku celiyay go’aanka dalkiisu ku diidan yahay cunoqabataynta lagu soo rogay Qadar,waxana uu muujiyay sida uu ugu rajo weyn yahay in xal loo helo dhibaatada ka jirta Gacanka iyada oo loo marayo wada hadal kaas oo aanan wax u dhimaynin madaxbanaanida Qadar.
Wasiirka arrimaha dibada ee Turkey oo ka hadlay shir-warbaahineed ayaa waxa uu yidhi « Waxaan mar kale ku celinayanaa in aanan marnaba aqbali doonin in xidhitaanka saldhiga ciidan ee Turkey uu noqdo qayb kamid ah codsiyadan».
Turkey ayaa waxay si adag uga soo horjeesatay go’doominta ay kusoo rogeen imaaradda Qadar isbaahaysiga Sucuudigu hor kacayo iyo codsiyada 13ka ka kooban ee kooxdani ay u gudbisay si ay u fuliso kuwaas oo Turkey ay ku tilmaamtay codsiyo meel kaga dhacaya madaxbanaanideeda, kana hor’imanaya sharciyadda caalamiga ah.
Waxa dhanka kale Turkey si xoog leh oo aanan gabasho lahayn ay is-garab taagtay imaaradda Qadar oo ay yihiin saaxiib aad u dhow si ay u daboosho baahida xagga cuntada ee uga iman jirtay dhinaca kooxdan cunoqabataynta kusoo rogtay,waxana ay usoo dirtay boqolaal diyaaradood oo sida waxyaabaha la quuto ee kala duwan.
Tallaabadan Turkey ay ka qaadatay xiisadan u dhaxeeysa qoysaskan Gacanka ee isku gu jirta sugida dhuuniga imaaradda Qadar ay u baahan tahay iyo ciidamada ay keentay ayaa waxay lama filaan ku noqotay qoysaskan.
« Burburka aadk u weyn ee loo gaystay Mosul iyo magaalooyinka kale ee Sunniyiinta+daawo	» Sarkaal Russian oo ka qayb galay kulankii dhexmaray wiilka Trump iyo qareenada Russia